November 12, 2020 - Achawlaymyar
November 12, 2020 by Achawlaymyar
အိပ်ရာဝင်ချိန် ရှောင်ကြဉ်ရမည့်အချက်များ 123 သင်အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ အခုဖော်ပြမဲ့အချက်တွေ ပြုလုပ်မိနေပါသလား?။45 ဒီအချက်တွေက အိပ်ရေးပျက်အောင် နှောင့်ယှက်တတ်တာမို့ ရှောင်ကြဉ်လိုက်ပါနော်။67 Credit : Healthydigest ============= Unicode အိပျရာဝငျခြိနျ ရှောငျကွဉျရမညျ့အခကျြမြား အိပျရာဝငျခြိနျ ရှောငျကွဉျရမညျ့အခကျြမြား သငျအိပျရာဝငျခြိနျမှာ အခုဖျောပွမဲ့အခကျြတှေ ပွုလုပျမိနပေါသလား?။ ဒီအခကျြတှကေ အိပျရေးပကျြအောငျ နှောငျ့ယှကျတတျတာမို့ ရှောငျကွဉျလိုကျပါနျော။ Credit : Healthydigest
အပျိုကြီးများရဲ့ ဒုက္ခ…ဒီလိုပြောတော့ ကျတော့်ကို အပျိုကြီးများက ဆဲလိမ့်မယ်…….
အပျိုကြီးများရဲ့ ဒုက္ခ…ဒီလိုပြောတော့ ကျတော့်ကို အပျိုကြီးများက ဆဲလိမ့်မယ်….။ ကားမောင်းတဲ့လူပျိုကြီးတယောက် ရဲ့ဘေးမှာအပျိူကြီးတယောက်ထိုင်လိုက်လာတယ်။ ကားမောင်းရင်း လူပျိုကြီးက ဂီယာချိန်းတော့ အပျိူကြီးပေါင်ကို လက်နဲ့ကိုင်မိတယ်။ သာယာတဲ့ အတွေ့အထိကြောင့် လက်ကိုပြန်မရုပ်မိဘူး။ အတော်လေးကြာလာတော့ အပျိူကြီးက အသံတုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့ စကားပြောပါတယ်…. “ဒီမှာ…. ဒီမှာ ဓမ္မသစ်ကျမ်း အခန်းကြီးငါးထဲက အခန်းငယ် သုံးကိုသတိရပြီး ဆင်ခြင်ပါ” လူပျိူကြီးလဲ အပျိူကြီးရဲ့ သတိပေးစကားကြောင့် သက်ပြင်းလေးချပြီး လက်ကိုပြန်ရုပ်လိုက်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာပါဘူး ဂီယာထိုးရင် လက်က ထပ်ကိုင်ထားပြန်တယ်။ အပျိူကြီးကလဲ ထပ်ပြီး သတိပေးရပြန်တယ်။ “ဒီမှာရှင့်…. ဒီမှာ ဓမ္မသစ်ကျမ်း အခန်းကြီးငါးထဲက အခန်းငယ်သုံးကို သတိရပါ” လူပျိူကြီးလဲ သတိပေးသံ စကားအဆုံးမှာ သက်ပြင်းလေးချပြီး လက်ကိုပြန်ရုပ်လိုက်ရပြန်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ အပျိူကြီးဆင်းမဲ့နေရာရောက်လို့ ကားရပ်ပေးလိုက်တယ်။ ဒီတခါမှာတော့ အပျိူကြီးက … Read more
မယားကြောက် (မ.ယ.က) ကြီးတွေကို အထင်တော့ သွားမသေးလိုက်နဲ့နော်…..
မယားကြောက် (မ.ယ.က) ကြီးတွေကို အထင်တော့ သွားမသေးလိုက်နဲ့နော် မယားကြောက်သူတွေ ဟာ ဆင်ခြေပေးဖို့အတွက် စဉ်းစားရင်းကနေ ဥာဏ်ပိုကောင်းလာတတ်တယ် မယားကြောက်​ တစ်ခါက.. အင်မတန် မိန်းမကြောက်ရတဲ့ မွိုင်ရှီအမည်ရှိ လက်သမားဆရာတစ်ဦး ရှိပါသတဲ့..။ တစ်နေ့တော့ လက်သမားဆရာဟာ သူပြုလုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ ပစ္စည်းတွေကို မြို့တစ်မြို့မှာ သွားရောက်ရောင်းချခဲ့တယ်။ အဲဒီလို ရောင်းချပြီး ငွေကြေးများစွာကိုလည်း ရရှိခဲ့တယ်။ လက်သမားဆရာဟာ သူရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအိတ်တစ်လုံးနဲ့ သေချာစွာထုတ်ပိုးပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ တောလမ်းတစ်နေရာအရောက်မှာတော့ သေနတ်တစ်လက်ကိုင်ထားတဲ့ ဓါးပြတစ်ယောက်က သူ့ကို ဓါးပြတိုက်တယ်.. “ဟေ့လူ.. ခင်ဗျားမှာ ငွေအများကြီးပါတယ်ဆိုတာ ကျုပ်မြို့မှာကတည်းကသိပြီးသား၊ ယီးတီးယားတား လုပ်မယ်တော့မကြံနဲ့၊ ဇီးသီးနွား စားသလို အသက်ပါပျောက်သွားမယ်၊ လာထား ခင်ဗျားရဲ့ငွေထုပ်”ဓါးပြဟာ ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ လက်သမားဆရာကို သေနတ်နဲ့ထောက်လိုက်တယ်..။ အဲဒီအခါ လက်သမားဆရာကြီးက“မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ..။ အိမ်ကို … Read more
မိနျးကလေးတိုငျးသိသငျ့သော ယောင်ျကြာံးကောငျး နဲ့ ယောင်ျကြာံးပြော့……
ဖေဖေ သမီး ဘုရားကို နောက်တစ်ခါ ထပ်မသွားတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ သမီး…
တန်ဖိုးရှိလိုက်တာ ဖေ​ဖေရယ် သမီး ဘုရား​ကို ​နောက်​တစ်​ခါ ဘယ်တော့မှ ထပ်​မသွားချင်​တော့ဘူး… ဖေဖေ သမီး ဘုရားကို နောက်တစ်ခါ ထပ်မသွားတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ သမီး… ဘုရားကို သမီးသွားတော့ တွေ့တဲ့လူတိုင်းက ဘုရားဝတ်ပြုနေတဲ့ အချိန်မှာတောင် ဖုန်းသုံးနေတဲ့သူနဲ့ အတင်းပြောနေတဲ့သူနဲ့ ဘယ်သူမှ တလေးတစား မရှိကြဘူး သူတို့အားလုံးဟာ သူတော်ကောင်းယောင် ဆောင်နေကြတာပဲ ဖေဖေ အင်း ဒါဆို သမီး ဘုရား မသွားတော့ဖို့ မဆုံးဖြတ်ခင် “ဖေဖေ သမီးကို တစ်ခုလောက် လုပ်ခိုင်းလို့ရမလား?” “ပြောကြည့်လေ ဖေဖေ ဘာများလဲ”..“ဒါဆို သမီး ဖန်ခွက်ထဲ ရေအပြည့်ထည့်ပြီး ဘုရားကို ၂ ပတ် လမ်းလျောက်ရမယ်” “ဒါပေမယ့် ရေတော့ လုံးဝ မဖိတ်ရဘူးနော”်….“ဒါလေးများ အေးဆေး လုပ်နိုင်ပါတယ် ဖေဖေ သမီး … Read more
ဘယ်လောက်ဝေးဝေးရေစက်ရှိတဲ့သူတွေကကိုယ့်အနား အလိုလို ရောက်လာမှာပဲ….
ဘယ်လောက်ဝေးဝေးရေစက်ရှိတဲ့သူတွေကကိုယ့်အနား အလိုလို ရောက်လာမှာပဲ…. ဘယ်လောက်ဝေးဝေးရေစက်ရှိတဲ့သူတွေကကိုယ့်အနား အလိုလို ရောက်လာမှာပဲ…. ဘယ်လောက်နီးနီးရေစက်ကုန်သွားတဲ့ သူတွေကတော့ခွဲကြရဦးမယ်…. ဘဝဆိုတာ…အရာရာစိတ်တိုင်းကျတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး… စိတ်မပျက်ပါနဲ့….ဒုက္ခဆိုတာရှိလို့ သုခအမှန်ရှာရင်းနဲ့သစ္စာကို ရှာတွေ့သွားကြတာပဲမဟုတ်လား… လောကနိယာမတွေကရိုးရိုးလေးတွေးရင်ရှင်းရှင်းလေးပေါ်လာတယ်…. ဆုံလာကြသမျှ တစ်နေ့ခွဲရမယ်…ဖြစ်လာတာမှန်သမျှ တစ်နေ့ပျက်ရမယ်.. အနှေးနဲ့ အမြန်ပဲ…ဆွဲထားလို့ ရရင်တောင် ခဏပါပဲ…. ဘာကိုမှ တရားသေစွဲမထားတဲ့သူဟာလွတ်လပ်တယ်…. ဘာကိုမှဆုပ်ကိုင် မထားတဲ့သူဟာပေါ့ပါးတယ်… အလိုက်သင့်လေးနေတတ်တဲ့ သူဟာငြိမ်းချမ်းပါလိမ့်မယ်…. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ…လက်ရှိတွေးနေတဲ့အတွေးကိုကောင်းအောင်တွေး လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ် လက်ရှိတွေ့နေတဲ့သူကိုအကောင်းဆုံးဆက်ဆံ လက်ရှိအချိန်လေးကိုပဲအကောင်းဆုံး တတ်နိုင်သလောက်ဂရုစိုက်နေရင် ရပါပြီ…. ဒါ ကိုယ့်အနာဂါတ်အတွက်အကောင်းဆုံး အရင်းအနှီး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်…. ငြိမ်းအေး၊လွတ်လပ်သောဘဝများ…ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ…။ Nan Kyawt Shwe Su Credit Unicode ဘယျလောကျဝေးဝေးရစေကျရှိတဲ့သူတှကေကိုယျ့အနား အလိုလို ရောကျလာမှာပဲ…. ဘယျလောကျဝေးဝေးရစေကျရှိတဲ့သူတှကေကိုယျ့အနား အလိုလို ရောကျလာမှာပဲ…. ဘယျလောကျနီးနီးရစေကျကုနျသှားတဲ့ သူတှကေတော့ခှဲကွရဦးမယျ…. ဘဝဆိုတာ…အရာရာစိတျတိုငျးကတြော့ မဖွဈနိုငျဘူး… စိတျမပကျြပါနဲ့….ဒုက်ခဆိုတာရှိလို့ … Read more
မိန်းကလေးတွေ မကြိုက်တဲ့ အမှန်တရား နည်းနည်းတော့ ခါးမယ် ဖတ်ကြည့်… ယောင်္ကျားတွေတော်တော်များများက အများပျော်အောင် Facebook မှာဖြစ်ဖြစ် အပြင်မှာ သူငယ်ချင်းဆုံရင်ဖြစ်ဖြစ် လုလုအောင်ဟေ့ !!! မအေးသောင်းဟေ့ !!!စသဖြင့် ရီစရာတွေရေးတင် ဟာသတွေလုပ်ပြီး Troll နေကြတာ… တကယ့်အပြင်လောကမှာတော့ လုလုအောင် မအေးသောင်း ဆိုရင် ဘယ်ကောင်မှ ဘာမှကို မခံစားရတာဗျ။ (တကယ်ပြောတာ ဘာမှကို မခံစားရပါ) ဒါ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဂုဏ်တင်ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ယောက်ကျားအများစု ( အများစု )ရဲ့ ခံယူချက် စိတ်နေသဘောထားကို ပြောပြတာ။ကျားသဘာဝ တို့ Men’s Behaviour တို့ ယောက်ကျားစရိုက် တို့ကြောင့်ဘဲဗျ။ဝတ်မှုံရွှေရည် ဘယ်လိုလှလှ ၊ ခင်သန်းနုဘယ်လို လှခဲ့လှခဲ့ ၊ မို့မို့မြင့်အောင် ဘာဖြစ်ဖြစ် သူတို့နဲ့ နီးနီးစပ်စပ် … Read more
ရှောင်ဖယ်စပြုလာတဲ့ ချစ်သူကို အချိန်မီ ဘယ်လိုပြန်ယူမလဲ…
ရှောင်ဖယ်စပြုလာတဲ့ ချစ်သူကို အချိန်မီ ဘယ်လိုပြန်ယူမလဲ… ချစ်ရသူက သင့်ကို ရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ် လုပ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား …၊ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေကို လိုက်လုပ်ကြည့်ဖို့ ပရိသတ်ကြီးကို တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ တကယ်လည်း မခက်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ သင့်ချစ်သူဟာ သင့်ဆီမှာ တ၀ဲလည်လည် ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်နော် …။ (၁) အဆက်အသွယ် မပြတ်အောင် ကြိုးစားပါ… လူချင်း ရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ် လုပ်နေပြီဆိုရင် ဖုန်းချင်း၊ လူမှုကွန်ယက်ချင်းတော့ အဆက်အသွယ်အနည်းဆုံး ရှိနေပါစေ။ လူဆိုတာ အနေနီးတဲ့ဘက်ကို စိတ်က ယိမ်းယိုင်ချင်တယ်ဆိုဦးတော့ သင်နဲ့ သင့်ချစ်သူရဲ့ နီးစပ်မှုကို ယှဉ်လို့မမီပါ။ အချိန်မီ ဆက်သွယ်ပြီး သူ့သံယောဇဉ် ဒီဂရီကို လိမ္မာတဲ့ နည်းကို သုံးပြီး မြှင့်တင်လိုက်ပါ …။ … Read more